सङ्खुवासभाको सिलिचोङ–१ सिसुवाखोला बेसिन्दामा गएको पहिरोमा पुरिएर जीवितै उद्धार गरिएका ७९ वर्षीय गोवासिंह राई अझै पनि साता दिनअघि गएको पहिरोको झझल्कोमा हुनुहुन्छ । जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा उपचार गरिरहेका गोवासिंह निद्रामा पनि पहिरोले लग्यो भन्दै बर्बराउनुहुन्छ । झपक्क निदाउन खोज्दा त्यही पहिलेको झझल्को आएपछि चिच्याउनुहुन्छ र बर्बराउन थाल्नुहुन्छ । “मेरो जीवनको ७९औँ वसन्तमा त्यो दुःखद् रात आयो र गयो पनि”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यही रातको नियति अहिले अस्पतालको श्ययामा भोगिरहेको छु ।” मुसलधारे वर्षा बर्सिएको कालो रातको सम्झनाले अझै पनि उहाँलाई झस्काइरहेको छ । “रातभर पहिरोमै पुरिएर घिटीघिटीको अवस्थापछि मेरो उद्धार भएको हो”, उहाँले त्यो रात सम्झँदै भन्नुभयो, “पहिरोसँगै ढुङ्गा र माटो धेरै पटका निलेँ । हातखुट्टा र शरीर पूरै पुरिएको थियो ।”
Aarthik Abhiyan5दिन पहिले
रुकुम पश्चिम – कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले कर्णालीका प्रत्येक नागरिकलाई धनी बनाउने आफ्नो सपना रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले अझ रुकुमका नागरिकलाई कसरी स्वरोजगार बनाउने र कसरी समृद्ध समाज बनाउने भनेर प्रदेश सरकार विभिन्न योजना बनाएर कार्यान्वयनतर्फ लागेको उल्लेख गर्नुभयो । आज आइतवार रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकामा स्थानीय प्रगतिशील युवा क्लबले वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै मन्त्री शर्माले गरिबलाई धनी र धनीलाई समुन्नत ब...
दशैंमा इन्द्रेणी सपना : आकाश कि सागर ?
तपाईंलाई थाहा छ, इन्द्रेणी किन ठिक्क उचाइमा देखिन्छ ? अझ भनौं किन इन्द्रेणी न धेरै पर हुन्छ, न धेरै नजिक ? तपार्ईंको दिमाग पक्का विज्ञानका परिभाषा पल्टाउन आतुर होला यो प्रश्न सुन्दा ? ल सुन्नुस्, म सुनाउँछु एउटा कथा– भगवान इन्द्र एकदिन बडो प्रशन्न मुद्रामा रहेछन्, ७ लोक १४ भुवनको रङ्गिन यात्रा गर्दै, मनमोहक प्राकृतिक […]
सपनाको सागर बोकेर हिँडेको म कहिले त्यो गल्ली या ठूला-ठूला निर्माण गरिएका सडक उक्लँदो जीवनको जोस-जाँगर अझै पनि मेरा लागि काठमाडौँ, एउटा बिरानो सहर।
प्रकाशले भने, 'झन्डै नौं वर्षअघि करिअर बनाउने सपना बोकेर काठमाडौं आएको थिएँ। बाग्लुङबाट नाइट बसको सिट नं ११ मा बसेर काठमाडौं आएको मलाई अझैं याद छ।’
अझै सेतो कोट लगाउने सपना देख्ने?
एकचोटी मनन गरौँ त यस्तो महामारीमा एक दिन मात्र उनीहरू हात बाँधेर बसिदिने हो भने यहाँ सबै ठाउँ मसान घाट बन्ने छ। उनीहरूले आफ्नो प्राणलाई हत्केलामा राखेकाले आज हामी र हाम्रो परिवार मृत्युसङ्ग जम्का भेट गरेर मृत्युको मुखबाट फर्किएका छौं।